Shiinaha oo filimkii ugu horeeyey ee documentary dagaal ka diyaariyey Somalia – SBC
Shiinaha oo filimkii ugu horeeyey ee documentary dagaal ka diyaariyey Somalia
Posted by editor on February 17, 2012 Comments
Shirkad laga leeyahay wadanka Shiinaha oo soo saarta filimada ayaa diyaarisay filimkii ugu horeeyey ee ku saabsan dagaal ee lagaga hadlo arin ku saabsan wadanka ka baxsan dalkaasi kaasi oo lagu wado in uu dhawaan qabsado goobaha filimada lagu daawado horaanta bisha March ee soo socota.
Filimkan oo lagu magacaabo “The Somalia Truth” ama runta Soomaaliya ayaa 9-ka bisha March la baahin doono waxaana uu ku saabsan yahay xaalada dagaal ee Soomaaliya, iyadoo arimaha filimkan xooga saarayo a ka mid tahay burcad badeednimada iyo nabadgalyo la’aanta ka jirta Soomaaliya.
Lv Jianmin oo ah agaaasimaha Shirkada lagu magacaabo Mtime.com oo filimkan sameysay ayaa sheegayy in ujeedada filimkan ay tahay sidii xaalada ka taagan Soomaaliya aduunka loogu soo soo duwi lahaa.
Kooxda filimkan soo saartey ayaa 33 maalmood waxay ku sugnaayeen gudaha Soomaaliya.
Filimkan waxaa ka muuqanaya rag Soomaaliyeed oo lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin kooxaha burcad badeeda, iyadoo mid ka mid ah ragaasi oo filimka ka dhexmuuqanaya uu ku cadaatabayo inaanu aheyn burcad badeed balse ay yihiin geesiyaal.